प्रहरीको गिर्दो शाख बचाउन सरकारले प्रहरीको नेतृत्व हेर्नुमा होईन, हेराईलाई प्राथमिकता दियोस् — Motivate News
Posted on April 1, 2018 by Ghanshyam Shrestha
काठमाडौँ- केही दिनमै आईजीपीको पदमा आसिन हुन पुग्ने भनिएका पात्रहरु जुन देखिन्छन् त्यो हुदै होईनन् । बास्तबमा यिनीहरु को हुन त ? र पहिचानमा यिनीहरु बिच के फरक छन् त ? हेराईलाई पुष्ट्याई गर्ने उनीहरुको आधारहरु के के हुनत् त्यसको हिसाब किताब गर्नु पर्ने हुन्छ नै ।लट्टाईबाट उडेको चङ्गाको भबिष्य के हुने हो र त्यो कहां पुग्ने हो त्यसको निर्क्यौंल बास्तबमा उडाउने ब्यक्तिको शिप क्षमता अनि योग्यतामा भर पर्छ नै । चङ्गालाई मात्र हेरी मुल्याङन गर्दै हिड्छौ तर यो परिकपक्बता अबश्य होईन किनकी यो हेर्नुसंग मात्र मेल खान्छ तर हेराई संग होईन । हुन त प्रकाश अर्याल आईजीपी हुन तर कुन अबस्थामा कस्ले कुन परिस्थितीमा उनी त्यो पदमा पुगे त ? आखिर उनलाई काम तामेल गर्दै हिड्ने पात्रको रुपमा किन चरित्रण गरियो त ? चङ्गा उनी बास्तबमै उनको लट्टाई कसैले पक्डेको त छैन ।
हिजो पुर्र्व वत सरकारको पालामा पदोनोन्नतीको जिम्मा लिएका निर्णायक मण्डलीका मुख्य हर्ताकर्ता तत्कालीन गृह सचिब रेग्मी आफ्नो ब्यबसायिक भुमिकाबाट चुकेका छन् । आफ्नो निष्ठालाई बन्धकी राख्दै ब्यक्तिबादी सोच परिपुर्तीको लागी उनले गरेका निर्णयहरुबाट कतिपय स्बभाबानी कर्मचारीहरु पिडाको शिकार बन्नु परेको छ । जेन तेन ऐन तेन गरेर उनलाई मुख्य सचिबको रोगले ग्रसित बनाएको थियो । ब्यबसायीक र निष्ठाबान भिजन भएकाहरुलाई लाखा र पाखा लगाउदै आफ्नालाई च्याप्दै भाषणमा शुसासनको गफ दिने यी पात्रहरुले समान अबसरको र कार्य सम्पादनको खिल्लिनै उडाई दिए । ३६० डिग्री घुमेको यस सरकारले कथित निर्णायक मण्डलिबाट छम्यनै गर्न नसकिने भएका गल्तीहरुलाई सच्याउने छ । राष्ट्रीय सोचबाट ओतप्रोत भै दण्डहिनतालाई न्यनिकरण एबम अपराध र भ्रष्ट्राचारको बिरुद्द शुन्य सहनशिलताको निती अपनाउने धिरु बस्न्यात जस्ता काबील अफिसरहरुलाई न्याय मिल्ने छ । यो केही पनी होईन उसको निष्ठाबान उत्कृष्ट कार्य सम्पादन र राम्रो सोच अनुरुप दिएको परिक्षाको परिमाण हो । जहा निर्णायक मण्डली द्दारानै म्याच फिक्कसिङ गरिन्छ भने उनको के कसुर र ? भनिन्छ सत्य लुक्दैन रे आउछ ढीलो गरेर ।
कथित रोल मोडेलहरु र उनका साथीहरुले पाएका अबसरहरुको बिच तुलना नै गर्न सकिन्न । कहांको राजा र कहांको सुकुम्बासी । सुकुम्बासीहरुले सदैव समान अबसरको सपनामात्र देखी राखे तर दिवा सपना बाहेक केही भएन । लागतको अनुपातमा बढी प्रतिफल ल्याउने यीनै सकुम्बासीहरु आज प्रहरीको सानमान र शाखा गिर्न नदिन परिबार, ब्यक्तिगतको सोचलाई परबाह नगरि राष्ट्रबादी सोच अनरुप मरिमेटिरहका छन् । यीनीहरुको सही सदुपयोग गर्न लट्टाई बाक्नेहरुले कहिले चाहेनन् । राम्रो गर्ने यीनीहरुको निष्टाबान चरित्रहरु उनीहरुको लागी फलिफाप हुदैनथ्यो त्यसैले उनीहरुलाई छायामा राख्ने काम गरियो ।
आज भोली नेतृत्ब हत्याउने बेलालाई हिसाब किताब गरि केही बर्षहरु देखी सिगारिएर राखिएका नेपालको दुर्गम क्षेत्रहरु जान नपरेको यी राजकुमारहरुका लागी राजधानीमा बनेका जति पनी काम देखाउने प्रहरी कार्यालयहरु यीनिहरुको लागि पैदाशीरुपमा बनेका थिए त्यसमा भनीएका सुकुम्बासीहरु अटाउन सक्तैन थिए । निरन्तर रुपमा पटक पटक परिसर काठमाण्डौ, कहिले ट्टाफिक, कहिले प्रबक्ता, शीआईबी, आईजीपी सचिबालय, त्यस पछि अपराध महाशाखा लाग्छ उनीहरुकै पोष्टिङको लागी स्थापना गरिएका हुन् । बेला बेलामा बिचमा बिश्राम र डलरको लागि बिदेश शेयर गर्नु यीनीहरुको बाया हातको खेल थीयो । लट्टाई बोक्नेहरुको आशिर्बाद यिनिहरुलाई नै थीए । एक तिर राम्रा पोष्टीङ अरु तिर डलर दुबै हातमा लड्डु ।
लट्टाई बोक्नेहरुले यस्ता रोल मोडेलको रुपमा उतारिएका चङ्गाहरु नउडाउने कुरै भएन । दरबारले हुर्काएझै ईनिस्पेक्टरबाट आफ्नो ब्याचका साथिबाट चुढालेर छुट्टै डिएसपी यिनीहरुको एकलौटि रुपमा पदोनन्नती गरियो र केहीलाई कथित फुलमा सुगन्धको लागी पनि संगै लगियो। जब त्यो कथित फुलको लागी सुगन्ध नै खतरा हुन थाल्यो । कही उनीहरुको आईजीपीको लालपुर्जा सुगन्धले छिन्ने त होईन भन्ने त्रासले उनीहरुलाई सताई रह्यो । अप्रतिस्पर्धिको रुपमा ल्याईएका यिनीहरुलाई जसबाट खतरा थियो उनीहरुलाई छायाँमा राखियो । अप्रतिस्पर्धाबाट आएकाहरु सित रोग सित लड्ने क्षमता बलियो छ भन्न मिल्दैन ।
हिजोको द्दन्दमा रोल्पा रुकुममा बसी कुनै परिक्षा दिनु नपेरको र भोली सिके राउत र बिपल्ब चन्द समुह चंम्कने बित्तिकै सुरक्षित स्थानमा राखिने यी पात्रहरू हुन् । यिनिहरु पहिले देखिनै मेड फर आईजीपी हुन त्यसमा पनि सगठनको लागी अपरिहार्य भन्दै कथित रुपमा लट्टाई बोक्नेहरुले चित्रण गरेका छन् । नेपाली जनतालाई के थाहा ? यस्ताबाट कुन स्तरको सुरक्षा पाउने हुन । भर्खरै नबराज सिलबाल घटना र डाक्टरमा प्रहरी नेतृत्ब हस्तान्तरण घटना मन्चन यस्तै पात्रहरुलाई चङा सरी उडाउने लट्टाई पक्रेका हातबाट भएको कुरा तथ्य बाहिर आएका सबैलाई जानकारी छ । हुनत नबराज सिलबाल एक नम्बर मात्र होईन उनी सक्षम दक्ष र काबिल अफीसर थीए । उनीलाई शुरुदेखिनै आफ्ना ब्याचका २५ जना एसएसपी सम्म प्रतिस्पर्धीहरु सितै लडाउदै ल्याईएको हो । माझिएर बनेका ब्यक्तित्बलाई किन प्रहरीको नेतृत्ब दिईएन किन उनलाई बाहिर गरियो? प्रहरी बिरासतले आफ्नो तालमा उनलाई उडाउन सक्तैन थिए । त्यस पछी लट्टाई समात्नेहरु र उनीहरुले उडाउदै आएको चङाहरु दिन समाप्त हुने र निष्ठाबान ब्यबसायीक दुरदृष्ठी भएका प्रहरीहरुको दिन शुरु हुने भएको हुदा सो बाट बच्न कुनै पनी हतकण्डा गर्न उनीहरुले बाकी राखेनन् पछि डाक्टरको हातमा समेत नेतृत्ब दिन सम्म तयार भए ।
नंया सरकारले शुसासनको कुरालाई बढाई चढाई उठाउदै आएको छ जसमा समानता भन्ने कुरा ठुलो हो । तर पनी प्रहरी सगठन भित्र किन यस्ता राजकुमार जस्ता केही चरित्रहरुलाई अपरिहार्य बस्तुको रुपमा लिईदै आएको छ उनीहरु बिकल्पमा कोही पनी छैन भनिदै आएको छ । जहा गए पनि, जता गए पनि उनीहरुकै चर्चा हुने गर्छ । काम गराई नै बोल्छ भन्ने सिद्दान्त अनुरुप गतिशिल हुने व्यक्ति बोल्दैन । तर आज किन बोलि नै काम भन्दा ठुलो हुन्छ भनि चित्रण गर्न खोजिदै छ ।
लगानी बढी तर उत्पादनमा कम दिने यस पात्रहरु भन्दा नेपालको सुहाउदो कृषी बिकाश बैकको भुमिकामा रहेका निष्ठावान कर्मचारीको नेतृत्व आजको माग हो जसबाट सर्ब साधारणले प्रहरी सेबा लिन सक्ने देखिन्छ । भनिन्छ केन्द्रित चार्टर बैकको रुपमा बनेका यि पात्रहरुबाट नागरिक केन्द्रित प्रहरी सेबा हुन कदापी सक्तैन । बेश लाईन सर्भेमा लगानी र प्रतिफलको हिसाब किताब हुने गर्छ । कम लगानी गर उनी राम्रो प्रतिफल लिउ भन्ने हुन्छ । कसैले पाच हजारको लगानीबाट एक लाख बनाई सक्छ तर अर्कोलाई दिएको ५ लाखबाट ७ लाख सम्म पनी बनाउन हम्मे परिराखेको हुन्छ। हेर्दा त पछिल्लो भनिएको रकमनै बढी देखीन्छ । तर पनी हेराईलाई आधारमान्ने हो भने आजको आबश्यकता पछिल्लो पात्रको होईन बास्तबमा अघिल्लो को हो ।
भनिन्छ प्रहरीको शत्रुको नास गर्ने भगवतीको शक्तिसगै लक्ष्मीको बास हुदैन भनेर तर यसको अपबादमा यी पात्रहरू थिए। तर यी पात्रहरुको ठिक उल्टो जुनै ठाउमा जाँदा पनि खाली हात गै खाली हात फर्कने, कहिले पनि पद र पोजिसनलाई पैसामा नसाट्ने र निरन्तर रुपमा सगठनको छवि उकास्ने र जनताको सेवामा लागी रहनेहरु भगवतीको अनुयायी बन्नेहरु हाल सकुम्बासी जस्तै देखिएका छन् । तर बास्तबमा उनीहरु सगठनको हक हित र जनता केन्द्रित सेबामा लागेर सुकुम्बासौ बनेका हुन् । यो निष्ठावान चरित्रको उदाहरण हो । उनीहरुले बनाईदिएको सगठनको मुल्य मान्यतालाई कथित बनाउदा रोल मोडेलहरुले बिक्रि गर्दै रहे । तर्कको आधारमा राष्ट्र, सगठन अनी शान्ती सुरक्षाको जानी जानी सुकुम्बासीहरु बन्नेहरुको यस राज्यले अबश्यनै श्रृण तिर्ने छ ।
आखिरमा ईच्छा शक्ति नै रहेछ जस्को बलमा चित्रण गरिएका सुकुम्बासीहरुले आफूलाई असहज परिस्थीतिमा राखी राष्ट्रिय सोच अनरुप काम गरिराखे । बास्तबमा उनीहरुको पछाडी कोही पनी छैन र उस्को लागी चङ्गा भन्नु र लट्टाई भन्नुनै उ आफै हो । यस्ता पात्रहरु स्बाभिबानी अनी जिम्मेबारी प्रति बिश्बास योग्य ठानिन्छ । खारिएका, स्पष्ट दुरदृष्ट्री भएका बुद्दिमान, साहसी ब्यक्तीत्बको पहिचान हेराई माध्यमबाटै हुन्छ । अरुको बलमा आएका ब्यक्तीहरुको नाभिय शक्ती कतै हुन्छ जो रिमोर्ट कन्ट्रोलको सहारामा नाच्ने गर्छन् र उनीहरु काम तामिल गर्ने कुराहरुमा माहिर हुन्छ । ब्यक्तीगत स्बार्थीबाट उठेर राष्ट्र बनाउन यस सरकारले आर्थीक समृद्दीको लागी राष्ट्रियता र सरकारको मिसनमा सिङ्गो प्रहरी शक्ती परिचालन गर्ने सक्ने चित्रण गरिएका सुकुम्बासीको हातमा नेतृत्ब दिनु पर्नेबाहेक को कुनै बिकल्प छैन । यसको लागी यस सरकारले नागरिक प्रतिको धर्मको नाममा हिम्मत गर्नु पर्छ । हेर्ने होईन हेराई प्रती केन्द्रित रही अबको प्रतिस्पर्धीहरु डिआईजीपीहरु आईजीपीको डिआईजीपीहरु भन्दा जनताको डिआईजीपीहरु मध्येबाट सही आईजीपी नियुक्त गर्नु सरकारको जनतामाझ पहिलो सन्देश हो । जस्ले सरकारको छवि जनता माझमा निर्माण गर्ने छ। नत्र भए जो आए पनी कानै चिरेको भन्नु सिवाए केही हुदैन । तसर्थ यस बिषम परिस्थितीमा प्रहरीको गिर्दो शाख बचाउन सरकारले प्रहरी प्रमुखको नेतृत्वको चयनको आधार हेर्नुमा होईन, हेराईलाई बनाउनु पर्छ ।